सरकारलाई एनआरएनको पत्र | samakalinsahitya.com
श्रीमान्/श्रीमति/सुश्री ६०१ को सरकारमा हामी एनआरएन अर्थात् ‘नव रङ्गी नेपाली’को हार्दिक नमस्कार, ढोग, नमन, साष्टाङ्ग दण्डवत्, सलाम, रामराम, लाल सलाम, जय नेपाल र लास्टा“ सलामवालेकम !
सर्वप्रथम त हाम्रो नामाकरणको रहस्य सरकारलाई सुनाउ“न चाहन्छौ“ । नया“ नया“ देशमा गएर नेपाली राजनितिको नया“ रङ्गले, नया“ ढङ्गले प्रचार प्रसारमा लाग्ने भएकाले र समस्यामा परेका नेपालीदेखि कोशौ“ टाडा भाग्ने भएकाले हामीले हामीलाई एनआरएन भनेका हौ“ र यो एनआरएनको पूरा रुप ‘नव रङ्गी नेपाली’ हो । हामी छेपारोले झै“ रङ्ग फेर्न र चुनावका बेला चेपारो घस्नमा माहिर छौ“ । हामी यो नया“ जमानामा नेपाललाई नया“ बनाउनमा लाग्ने प्रणले संस्थागत भएकाले पनि हाम्रो नाम सार्थक छ भन्ने हामीलाई लाग्या छ । नामको सार्थकतापछि कामको सार्थकतातिर हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ“ ।
स्थापनाकालदेखि हामीले गर्दैआएका महान उपलब्धीलाई हामी यहा“ बा“ढ्न पाउ“दा खुसीले गद्गद् भएका छौ“ । हामीले गरेको सवैभन्दा महान काम हाम्रो संस्थाको स्थापना हो । पृथ्विनारायण शाहले ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन’ भनेजस्तै ‘हाम्रा साना स्वार्थले आज्र्याको संस्था होइन’ । संस्था गठनपछि हामीले विश्वभरि शाखा खोलेर यो रसियाब्यापी संस्थालाई विश्वब्यापी बनाउन महान भुमिका खेल्यौ“ । त्यसपछि हामीले बर्षैपिच्छे नया“ पार्षद् थप्यौ“ र पुराना पार्षद्लाई नविकरण गरायौ“ । पार्षद् थप्दा र नविकरण गराउ“दा हामीले मोटो रकम बटुल्ने नितिलाई निरन्तरता दियौ“ । मोटो रकम असुल्ने तर परिआउ“दा लुक्ने हाम्रो रणनितिले गर्दा हामीले उन्नाइसौ“ लाख नेपालीमा एक लाखभन्दा कम सदस्य बनाउन सफल भएका छौ“ । तर यस्तो हुनुलाई हाम्रो कार्यशैलीस“ग बितृष्णा भएर सदस्य नबढेका हुन् भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने हामी गम्भिर असहमति जाहेर गर्दछौ“ । खास कुरो के हो भने ‘धेरै विरालाले मुसो मार्दैनन्’ भनेर प्रवाशी नेपालीहरुले ‘नव रङ्गी नेपाली’ जस्तो महान संस्थालाई चुस्त, दुरुस्त र तन्दुरुस्त पारीराख्न जम्बो टोली नबनाएका हुन् । चार करोड जनतामा छ सय एक सभाषद् हुनु पनि नेपाली जनताको यस्तै उदार भावनाले हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । त्यसैले सदस्य संख्या बढाउन नसक्नु भन्दा पनि नचाहनुमा सरकारको पनि हाम्रैजस्तो बुझाइ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
अन्य केही महान उपलब्धीलाई हामीले यहा“ उल्लेख गरेनौ“ भने गम्भिर त्रुटी हुने देखिएकाले हतारहतार हामी भनाइ र गराइमा कठिबद्ध नभए पनि यो पत्रमा लिपिबद्ध गर्न चाहन्छौ“ । हामीले खाडी र मलेशियामा रहेका नेपालीलाई समेट्नुका पछाडिको कारण गुह्य छ । र त्यो के भने अन्य मुलुकमा भन्दा ति मुलुकमा काम गर्न गएका लाटासिधा नेपालीलाई फस्ल्याङ्गफुस्लुङ्ग पारेर सदस्य बनाउन सकिन्छ भन्ने भित्रि ‘ग्राइनडिजाइण्ड’ हो । यसरी एकपटक चिप्लो घसेर बसमा पारियो भने रकम हातालागी भइहाल्छ । फेरि तिनै देशमा अन्य देशमा भन्दा धेरै संख्यामा नेपाली कामदार छन् । हाम्रा सदस्य पनि तिनै देशमा धेरै छन् । यो यसै निति अनुसार सम्भव भएको हो ।
एकसय वियासी दिन कटेकालाई सदस्य बन्न पाउने नियम बनाउनुको पनि बेग्लै कथा छ । हाम्रो मुख्य सदस्य भएका खाडी राष्ट्र र मलेशियामा तिनले चाहेर पनि युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया आदि देशमा जस्तो ‘ग्रिन कार्ड’ पाउ“दैनन् । बरु पाए भने सिधै ‘रेड कार्ड’ पाएर नेपालै फर्किन्छन् । खाडी र मलेशियामा भएका श्रमिकको लागत पनि ख्वाप्पै र खटाइ पनि दह्रो अनि कमाइ पनि कम हुने भएकाले छुट्टिमा आउ“दैजा“दै गरे पनि धेरै बर्ष बस्ने गरेका छन् । यसो हु“दा धेरै बर्ष दुहुनु गाईलाई जस्तै तिनलाई हामीले दोइरहन पाउ“छौ“ । कहिलै थारो नहुने गाईका रुपमा हामीले तिनलाई बर्गिकरण गरेका छौ“ । एजेण्ट वा म्यानपावर कम्पनिलाई विदेश्याएवापत दिएको रकम उठाउनै तिनलाई एक सय वियासी दिन भन्दा बढि लाग्छ र करैले पनि बस्नुपर्छ । त्यही मौकामा हामी तिनलाई पार्षद् बनाइहाल्छौ“ । खास कुरो यही हो ।
हामीले सामुहिक लगानीको कुरो जोडतोडले उठाएका छौ“ । किन पनि भने हामी नेपालीमा कही“कतै कोहीस“ग पनि मेलमिलाप छैन । खुट्टा तान्ने, छिर्की हान्ने गर्नमा हामीले ‘पिएचडि’ गरेका छौ“ । कहिलै मिल्न नसक्ने नेपाली स्वभाव थाहा पाएर नै हामीले यो कुरोलाई अघि बढाएका हौ“ । मिलाउनै नसकिएपछि लगानी गर्नै परेन । त्यसै पनि यो नारा लोकप्रिय भएकै छ । नारा लोकप्रिय हुनु भनेको ‘नव रङ्गी नेपाली’ लोकप्रिय हुनु हो र यो लोकप्रिय हुनु भनेको बर्षेनी पार्षद् बढ्नु र अर्थतन्त्र बलियो हुनु हो । नेपालमा चुनाव गर्नु चाही“ सरकारलाई जनबल देखाएर मनोवल गिर्न नदिनु हो । यत्ती गरेपछि आलोचित हुनु पर्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । नेपालमा दर्ता गछौ“ भन्ने चै“ ‘हात्तीको देखाउने दा“त’ हो । दर्ता गरेर केही गर्न नसकिने सत्यलाई गोप्य राखे पनि काम नगरेको आधारमा सरकारले खारेज गर्ला र फोकटमा आउने नाम र दामलाई गुमाइएला भनेर हो ।
सरकारस“ग हाम्रा केही मागहरु छन् । हामी नेपालीहरु मागेरै काम चलाउ“छौ“, यो हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र हो । त्यही भएर हामीले दोहोरो नागरिकता मागेका हौ“ । खासमा यसरी हामीले दोहोरो नागरिकता माग्नुका पछाडिको राज पनि गज्जबको छ । हामीमध्येका उमेद्वारहरु सवै केही न केही ब्यावसाय गर्नेहरु छौ“ । यो एनसिसि र आइसिसि दुवैमा लागु हुन्छ । मन मात्रै हुनेलाई हामीले पार्षद्मै थन्क्याएर धन हुनेहरुलाई मेजर पोष्टमा तानेका छौ“ । यि सवै पउ“चवालाहरुलाई कालान्तरमा ग्रिन कार्ड मिल्ने देशमा ल्याउने हाम्रो योजना हो । त्यसमा पनि खाडी र मलेशियामा भएकाहरुका लागि यो दोहोरो नागरिकताका कुरा सकेसम्म लुकाउने गरेका छौ“ । लुकाउनकै लागि तिनले श्रमिक ल्याएर अलपत्र पार्दा पनि ‘तै“ चुप मै“ चुप’ गरेर बसेका हौ“ । किनकी हामी पश्चिमी देशमा भएकाहरुलाई बसेको देश र नेपालको नागरिकताको खा“चो छ । खा“चो किन पनि परेको हो भने यो ‘नव रङ्गी नेपाली’को संस्थामा हामीलाई हाम्रो पार्टीका मान्छेले धकेलेर÷बोकेर पठाएका हुन् । भोली नेपालमा राजनिति गर्न र त्यो नभए पनि कमसेकम दशै“मा ससुरालीमा टिका थाप्न भए पनि जानै पर्छ । त्यसैका लागि मात्रै दोहोरो नागरिकताको खा“चो हो । दिने भए आउ“छौ“, नदिने भए यत्रैसित्ती !
तथा नव रङ्गी नेपाली परिवार
अमेरिका/युरोप/रुस/क्यानाड र अष्ट्रेलिया